Maitiro ekuwana mapeji ewebhu anoda IE kana PC | Ndinobva mac
Maitiro ekuwana mapeji ewebhu paMac anoda Internet Explorer kana PC
Imwe nguva yapfuura takataura pairi ini ndiri Mac nezve sarudzo muSafari iyo isingatibvumidze isu kuziva maitiro ekuita iyo Yekuvandudza menyu muSafari Uye nhasi tiri kuzoona imwe yeaya mabasa anotibvumidza kushandisa iyi menyu, zviri zvekuona kana kuwana mapeji ewebhu paMac ne Safari browser iyo inoda Internet Explorer kana PC.
Izvi hazviwanzo kuitika kazhinji mumazuva edu kubhurawuza sezvazvinogona kuitika makore mashoma apfuura uye chikamu chekutenda kune chokwadi chekuti mawebhusaiti ari muHTML neCSS ayo anonyatsoenderana neiyo Safari browser. Kunyangwe chiri chokwadi kuti nguva nenguva mamwe mapulagini anodikanwa kusefa mambure, akanyanya kukosha akanyatsobatanidzwa muSafari uye haaratidze matambudziko ekushandisa. Muchiitiko chekuti nekuda kwechimwe chikonzero isu hatigone kuwana peji nekuti inoda iyo Internet Explorer browser kana PC (kazhinji mawebhusaiti ekare) izvo zvatinofanirwa kuita kuwana iyo Safari yekuvandudza menyu uye kumisikidza iyo yakavanzwa menyu 'kunyepedzera' uye kuita kuti peji kana saiti itende kuti tiri kushandisa Internet Explorer, PC kana bhurawuza kunze kweSafari.
Saka isu ticha tevera iyi diki dzidziso ine mashoma uye akanyatsoreruka matanho anozoita kuti uwane kuwana kune zvese zvemukati izvo iwe zvaungade kubva kuPc ine Internet Explorer kana bhurawuza kunze kweSafari. Nhanho yekutanga ndeye yekumisikidza iyo Developer menyu. Kugonesa ino yakavanzwa menyu Tichavhura hwindo reSafari uye tinya pane Zvaunoda. Pane imwe nguva yakazaruka tinofanira kuenda kumenyu yepamusoro (kurudyi tab) uye shandisa Ratidza iyo Yekuvandudza menyu mune yemenu bar.
Iye zvino isu tasarudza iyi menyu uye sarudzo yakavanzwa ichaonekwa mune yepamusoro menyu Development. Kana tangove nekuwana, sarudzo inosara yakasarudzwa zvachose uye ichatiratidza iyo yakatarwa menyu, ini pachezvangu ndinokurudzira kusasiya iyo menyu inoshanda kunze kwekunge tichazoshandisa iyi Yekusimudzira sarudzo kakawanda. Izvo zvakati, isu tinongofanirwa kubaya pairi isu paine webhu yakavhurika inoda Internet Explorer kana PC uye tinya pane yechipiri sarudzo Mushandisi wemushandisi.
Mumufananidzo uyu wepazasi isu tatoona zvese zviripo zvekuteedzera kuti isu tiri kubhurawuza kubva kuPc kana imwe browser isiri iyo yemuno Apple imwe. Kana tichida kuita dandemutande ratiri kubhurawuza tenda kuti tinozviita kubva kuPC tinofanirwa kushandisa sarudzo "Google Chrome - Windows" o "Firefox - Windows" uye kana ikasashanda neaya maviri sarudzo isu tichaedza ne "Internet Explorer".
Iye zvino tave kugona kuwana iyo webhu simulating yatinofamba nenzira isina Safari.
Ini ndinodzokorora, hazviwanzo kuwana mapeji ewebhu kana nzvimbo pamambure izvo zvisingabvumidze kupinda kubva kuSafari browser zvakananga uye pasina chikonzero chekuita hunyengeri uhu, asi zvimwe zvinoramba zviripo. Pane dzimwe nguva tinogona kuona kuti kunyangwe tichishandisa iyi diki dzidziso, kubhurawuza webhu kunoshanda nekuti zvinoda mamwe macodecs kana mapulagini asingaenderane neSafari uye inogona kusashanda. Kana tiine dambudziko iri Tinogona chete kuzvigadzirisa nekushandisa Windows chaiko uye nekuda kweizvi tinogona kushandisa muchina chaiwo paMac, Kufananidza kana kushandisa zvakananga PC kuita basa redu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuwana mapeji ewebhu paMac anoda Internet Explorer kana PC
Yakanaka kwazvo saiti uye zvinyorwa !! Ndine dambudziko uye nderekuti Safari iri mugadziriro yemodi haina kundiratidza Internet Explorer senzira
Ndakaenda pane zvandaifarira, ndikadzvanya paModelize Mode uye ipapo ndakaenda kuDevelopment / Mushandisi Wemagetsi uko zvinongondiratidza zvingasarudzwa zvina kubva kuSafari, Edge, 4 kubva kuChannel uye 2 kubva kuMozila
Ndingaite sei kuti ndiwane Internet Explorer kuti indiratidze? Ini ndinoda kuti izive nezve mupi, iyo inongoshandisa iyo tekinoroji uye yavo saiti haishande mune chero chinhu kunze kweIE, ruzivo rwakashata.
Pindura kuna Franky
Muchiitiko chekuti internet inotsvaga isingaoneke semushandisi mumiriri sarudzo, ndeipi tambo yandinofanira kushandisa?
Iyo Apple wachi yatove neChina kopi, iyo AiWatch
Snapselect, chirongwa chakangwara chaizvo kubata mapikicha ako